Hangzhou AODI Electronic Control Co., Ltd (AODI Charger), iri Hangzhou guta, pedyo Xiaoshan uye Shanghai Airport, ari nyanzvi kutungamirira yepamusorosoro zvebhizimisi zvitsva simba dzemagetsi motokari uye mumaindasitiri michina. Sezvo anotsigira nhengo National Innovation Fund, tiri vakaita kugadzira mudanga quality, mukuru kushanda zvemagetsi zvigadzirwa.
Kusvikira zvino, tine 7 dzinoti zvinhu nokuda Electric Auto Cars, kusanganisira mhepo-dzaserera mungarava bhatiri ndiro, mvura-dzaserera mungarava bhatiri ndiro, DC / DC convert Integrated mhepo-dzaserera kuchaja mugadziriro, Integrated mvura-haachandidi kuchaja hurongwa, Battery utariri maitiro (BMS), Intelligent mashoko chinouraya kuchaja maitiro APP uye mwanakomana on.We ndivo vokutanga yepamusorosoro zvebhizimisi pamwe akangwara date chinouraya kuchaja mugadziriro APP mu China.
Muna 2015, takavaka Product Innovation Management System (SPIM) uye Product Control Management System kuvandudza uye kuchiderera yakaderera Nokuraramisa reshiyo kuti vabudirire 0PPM yepamusoro chinangwa kuburikidza kudzidzisa zvoga yokuedzwa michina uye kugadzirwa mitsara pasi zvachose maitirwo ezvinhu uye operative kudzora nhungamiro . Zvino isu vanokwanisa kubereka 50000 inokwana zviyero ndiro uye DC / DC converters pamwedzi.
Aodi Charger ari kuva yako pedyo naye uye vakadzidza kuchaja mhinduro sezvo zvose munyika muno kunova magetsi.
Tinoshumira huru zvinhu zvishanu maindasitiri michina chikumbiro: Aerial basa papuratifomu, Floor kuchenesa michina, Golf ngoro, Material vaishandisa michina uye Electric midhudhudhu.
"Quality Kuziva" nguva dzose mupfungwa AODI vanhu, ndiko musimboti redu zvakafanira uye kuita IATF16949: 2016 / ISO9001: 2005 utariri hurongwa.
Regai vanozvishandisa vazive AODI,
Kuunza kukosha nokuda vanoshandisa,
Kugona hope nekuda AODI People,
Kupa kudzokera vanhu
Kugara wakatsiga Development
Dzoserai kuna vanhu